Kuboshwe oyedwa kwabathathu abasolelwe ukuphanga eSlangspruit | News24
Kuboshwe oyedwa kwabathathu abasolelwe ukuphanga eSlangspruit
Isithombe: SithunyelweAmaphoyisa ase Alex abophe umsolwa oyedwa kwabathathu abasolelwa ukuphanga esitolo sowokufika eSlangspruit.
ABASESHI basemaphoyiseni ase Alex babophe umsolwa wesilisa oyedwa kwabathathu abesilisa abasolelwa ukuphanga esitolo sowokufika eSlangspruit ngeSonto ebusuku, ngomhlaka 16 kuJulayi.
NgoMsombuluko, ngomhlaka 17 kuJulayi, okhulumela amaphoyisa ase Alex, uKaputeni Kholeka Mhlongo uthe lomsolwa ubengaka bekwa icala futhi engakaveli enkantolo kodwa amaphoyisa abesaqhubeka nophenyo.
“NgeSonto ngabo 7:25pm abasolwa abathathu bangene esitolo sowokufika kuleli endaweni yase Slangspruit abamukhombe ngommese baphanga amabokisi kagwayi wezinhlobo ezahlukene kanye ne-airtime konke okubalelwa emalini engu R5498.
Emuva kwalokho abasolwa babalekile endaweni yesehlakalo,” kusho uKaputeni Mhlongo.
Uthe lomsolwa oyedwa uboshwe khona endaweni yase Slangspruit emuva kokuthi amaphoyisa elandele umkhondo kanti amaphoyisa asathungatha abasolwa ababili.
Uqhube wathi yize lomsolwa engatholakalanga nesikhali noma nempahla eyebiwe kodwa ufakazi ukuqinisekisile ukuthi ungoyedwa wabasolwa abathinteka ekuphangweni kwesitolo sowokufika eSlangspruit.
Amalungu omphakathi angaba nolwazi ukuthi abasolwa ababili abathinteka kulesigameko bakuphi banxuswa ukuthi bexhumane namaphoyisa ase Alex kwi nombolo ethi 033 345 7703 noma beshayele inombolo yakwa CrimeStop ku 08600 10111.
Leli phephandaba lithanda ukumema abafundi balo ukuthi bazise ithimba leMaritzburg Echo ngezindaba zobugebengu emiphakathini noma ngezithinta imiphakathi abahlala kuyona ngokusithumelela umyalezo ku: makhosandile.zulu@media24.com noma bexhumane nentatheli ku 033 355 1329.